“Waan wada Ognahay waxa dhici lahaa haddii uu Maxamed Saalax Kor u boodi lahayn…!”- – Gool FM
“Waan wada Ognahay waxa dhici lahaa haddii uu Maxamed Saalax Kor u boodi lahayn…!”-
(England) 04 Jan 2019. Tababaraha Liverpool ayaa furka tuurtay isagoona ku andacoonaya inay ahayd in Kaarka Cas oo toos ah loo taago Kabtanka Manchester City Vincent Kompany kaddib falkii uu ku sameeyay Maxamed Saalax ciyaartii xalay 2-1 looga adkaaday Reds.
Daafaca reer Belgium ayaa taako halis ah u soo kacay xiddiga reer Masar oo doonayay inuu ka faa’iideysto kubbad ay qaldeen daafacyada City laakiin Kompany ayaa si waali ah uga reebay iyadoona loo taagay kaarka Jaalaha ah.
Gary Neville oo falanqeynayay Sky Sports ayaa sax ku sheegay Jaalihii la siiyay Kompany, laakiin Klopp ayaa ka soo horjeestay fikirkaas isagoona qaba inay ahayd in la siiyo kaarka Casaanka maadaama uu dhaawac ku soo afjari karay xilli ciyaareedka Maxamed Saalax.
“Dhabtii waan ka helaa Vincent Kompany,” Klopp ayaa sidaa u sheegay Sky Sports.
“Dhabtii waan ka helaa isaga laakiin sidee falkaas u noqon waayay Kaarka Cas?”.
“Wuxuu ahaa qofka ugu dambeeya, wuu soo galay haddii uu jug yar oo dheeri gaarsiin lahaa Xilli ciyaareedka oo dhan wuu maqnaan lahaa.
“Ciyaaryahan dhulka jiiftay una bareeray khatarta. Haddii uu Maxamed Saalax cagihiisa ku taagnaan lahaa oo uusan kor u boodi lahayn waan wada ognahay wixii dhici lahaa.
“Weli waa ciyaaryahan fiican, laakiin wuxuu sameeyay uun go’aan aad u xun dhabtii.”.
Sheeko QOSOL LEH oo ka dhacday ciyaartii ay Xalay Man City afka ciida u dartay Liverpool...(BAL EEG)